ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်လျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစပါးကုန်ကြမ်းများကိုငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအဏ္ဏဝါအစာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်, ခွေး, လိပ်, ဖား, ပုစွန်နှင့်ကဏန်း.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်လျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစပါးကုန်ကြမ်းများကိုငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအဏ္ဏဝါအစာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်, ခွေး, လိပ်, ဖား, ပုစွန်နှင့်ကဏန်း. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်တွင်မတူညီသောပုံစံများရှိသည်, ထို့ကြောင့်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရအမှုန်အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောငါးမွေးမြူရေးနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောငါးအစာထုတ်စက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ကြီးထွားမှုနှင့်အတူ, ငါးမွေးမြူရေး၏ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်, ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖော်မြူလာအစာကျွေးခြင်းများများပြားလာသည်. စီးပွားဖြစ်တောင့်တင်းသောအစာများသည်အစားထိုးလာပုံရသည် “လယ်ယာလုပ်လေ၏” နှင့် “မူရင်း” ပုံနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ. ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 3, စီးပွားဖြစ်အစာထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှနှုန်းဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည် 35% စဉ်အတွင်း 2008-2021, ထိုသို့နီးပါးစုစုပေါင်းရောက်ရှိခန့်မှန်းထားသည် 1.07 တန်ချိန်သန်း 2012. အစာကျွေးခြင်းအတွက်အကောင့်များ 81% ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှု၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်နေဆဲလွှမ်းမိုး (22%), သို့သော်ရေပေါ်ငါးအစာသည်အမြန်ဆုံးတိုးတက်ခဲ့သည်, ပျမ်းမျှတိုးနှင့်အတူ 89% လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်က. floating feed အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်: ရေနံ -coated အမျိုးအစား, Non-oil-coated အမျိုးအစားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်းအမျိုးအစား. ရေနံ - အခမဲ့ coated feed ကိုများအတွက်အကောင့် 95% စုစုပေါင်းရောင်းအား၏. အဓိကကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ရောင်းလိုအားမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်, အစာစျေးနှုန်းများနှစ်စဉ်နှုန်းမှာတိုးတက်လာခဲ့သည် 10% ရန် 18% မှ 2010 ရန် 2021. အမျိုးအစားပေါ်မူတည်, အလုံးလေးများနစ်မြုပ်သည့်အတွက် 3-4mm စိုက်ပျိုးသူများအစာကျွေးသောလက်လီစျေးနှုန်းမှာလက်ရှိဖြစ်သည် 35-42 BDT / kg, နှင့်ညှစ် floating feed ကို၏လက်လီစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 48-54 BDT / kg. အနည်းဆုံးရင်ပြင်ကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်လိုအားခန့်မှန်းခြင်းနှင့် Delphi နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်, ကစုစုပေါင်းအစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုအတွက်ခန့်မှန်းထားသည် 2015 နီးပါးတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည် 2.1 တန်ချိန်သန်း.